Umgca weHolland waseMelika ukhaba ixesha lokuhamba ngenqanawa ukuya kwiCaribbean
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Umgca weHolland waseMelika ukhaba ixesha lokuhamba ngenqanawa ukuya kwiCaribbean
I-Rotterdam entsha ye-Holland America Line iyahamba namhlanje, ngoNovemba 5, ngo-5 pm EST isuka e-Fort Lauderdale, eFlorida, ngohambo lwayo lokuqala lweCaribbean - uhambo oluya nokubuya lweentsuku ezintlanu oluya eBimini, eBahamas, kwaye luchitha iintsuku ezimbini kwi-Half Moon Cay. Inqanawa yafika ePort Everglades ngoNovemba wesi-3 kulandela uhambo lwayo lokuqala lokuwela iAtlantiki eyanduluka eAmsterdam, eNetherlands, ngoOkt.
I-Rotterdam iphawula inqanawa yesibini ukubuyela eFlorida ngenqanawa kunye neCaribbean ukuya eHolland America Line ukusukela oko kunqumama kwishishini liphela kwiinyanga ezingama-20 ezidlulileyo. NgoNovemba, inqanawa iya kudityaniswa ePort Everglades yiPinnacle Class sister-ship i-Nieuw Statendam kunye ne-Eurodam, ezithi nazo ziqalise amaxesha azo eCaribbean. U-Nieuw Amsterdam waqala ukuhamba ngeCaribbean ukusuka e-Fort Lauderdale nge-23 Oct.
Indlela yokuhamba ngenqanawa yayibhiyozela ukuhamba kweCaribbean eRotterdam kunye nabalandeli bokwamkela iindwendwe enqanaweni, kwaye u-Antorcha wayekho ukubulisa abakhweli.
Ukulandela uhambo lwe-Nov. 5, i-Rotterdam iya kuhamba ngomkhumbi kwi-Caribbean ukuya ku-Epreli, kunye nazo zonke iihambo ezijikelezayo ukusuka e-Fort Lauderdale. Ukuhamba ngenqanawa ukusuka kwiintsuku ezintandathu ukuya kwezili-11 kwaye kudlula ummandla kwindlela esemazantsi, empuma, entshona kunye neyetropiki. Iindwendwe ezijonge uhambo olude lokubaleka zingangena kuhambo lwabaQokeleli - uhambo oludityanisiweyo lokubuyela emva olubonelela ngophononongo olunzulu olugubungela indawo engaphezu kwenye.
Lonke uhambo lwaseCaribbean lubandakanya umnxeba eHalf Moon Cay, ukale izibuko lenombolo enye kwiCaribbean ziindwendwe zomgca. Le ndawo ingcwele iguqukile yaba yindawo yokudlala yabahambi ngenqanawa kwaye ibonakalisa ezona lwandle zigqwesileyo ezinesanti emhlophe, iivillas ezinemigangatho emibini kunye neekhabhana zabucala, iindawo zokutyela ezifana neLobster Shack, ipaki yamanzi yabantwana kunye nokhenketho oluzaliswe lulonwabo lwabathandi bendalo, abakhenkethi abangenamdla. kunye nabahloli.